ဦးခင်၏ကိုယ်ပိုင်နေရာ - ☺☺☺ဗုဒ္ဓကမ္ဘာ☺☺☺
Started this discussion. Last reply by ဦးခင် Mar 31, 2012.2Replies0Likes
တင်ခဲ့တဲ့ အကြောင်းအရာနဲ့ ပတ်သက်ပြီး စာဖတ်သူများ၏ အသိအမှတ်ပြုချက် ဆိုတဲ့ မှတ်ချက် လေး ထားရှိပေးနိုင်ရင် ကောင်းမယ်လို့ ယူပါတယ်။ သို့မဟုတ်ရင် ကိုယ်ရေးခဲ့တဲ့ အကြောင်းကို ဖတ်သူရှိလား မရှိဘူးလား ဆိုတာ…ဆက်လက်ဖတ်ရူရန်.........
ဝိပဿနာဆိုတာ စိတ်တစ်ခုက အခြားစိတ်တစ်ခုကို စောင့်ကြည့်ခြင်းဆိုတာနဲ့ ပတ်သက်ပြီး ရှင်းလင်းချက်
Started this discussion. Last reply by ကိုဉာဏ Jun 20, 2015. 17 Replies 1 Like
တရားထိုင်တယ်ဆိုတာ အလွယ်ပြောလိုက် တာဖြစ်ပါတယ်။ တစ်နည်းဆိုရရင် ရှင်တော် မြတ်ဘုရား ဟောကြားရမှာတော့ သတိပဋ္ဌာန်တရားကို အားထုတ်တာ ဖြစ်ပါတယ်။ သတိပဋ္ဌာန်တရား လေးပါးရရှိပါတယ်။(၁) ကာယာနုပဿနာသတိပဋ္ဌာန်(၂) ဝေဒနာနုပဿနာ…ဆက်လက်ဖတ်ရူရန်.........
တရားရှုမှတ်ရာတွင် ပဋိစ္စသမုပ္ပကိုမှမသိပဲ (တရားစာမသိရင် ) တရားမရှုမှတ်ကောင်းဖူးလို့ ဆိုတဲ့အချက် မှန်ကန်မှု ရှိပါသလား
Started this discussion. Last reply by ကလေးတို.ဆရာမ Feb 13, 2012. 24 Replies0Likes
အချို့သော ကမ္မဌာန်းပြ ဆရာများဟာ ယောဂီတစ်ပါးသည် တရားစာမသိ (အနည်းဆုံး) ပဋိစ္စသမုပ္ပ တရားကိုမျှ မသင်ကြားထားလျှင် တရားမထိုင်ကောင်း မရှုမှတ်ကောင်းဟု ပြောဟောနေကြပါသည်။ ဓမ္မမိတ်ဆွေတွေများကော…ဆက်လက်ဖတ်ရူရန်.........
သာသနာတွင် ဝိနည်းတော်သည် အသက်ဟု ဆိုကြပါသည်။
Started this discussion. Last reply by ဦးခင် Feb 5, 2012. 10 Replies0Likes
ယခုခေတ် သံဃာတော်များ သာသနာပြုနိုင်ရန် ဗုဒ္ဓဘာသာ မထွန်းကားသော နေရာများတွင် သာသနာပြုနိုင်ရန် အတွက်တရားဓမ္မ ကို ပိုမိုတတ်ကျွမ်း၇န်အတွက် သင်ကြားကြရပါသည်။ ထိုသို့နေရာများတွင် ဆွမ်းကွမ်းကိစ္စ၊ သာသနာဓမ္မ…ဆက်လက်ဖတ်ရူရန်.........
ကိုဉာဏ replied to ဦးခင်'s discussion 'ဝိပဿနာဆိုတာ စိတ်တစ်ခုက အခြားစိတ်တစ်ခုကို စောင့်ကြည့်ခြင်းဆိုတာနဲ့ ပတ်သက်ပြီး ရှင်းလင်းချက်'
ဒေါ်စန်းစန်းစိုး replied to ဦးခင်'s discussion 'ဝိပဿနာဆိုတာ စိတ်တစ်ခုက အခြားစိတ်တစ်ခုကို စောင့်ကြည့်ခြင်းဆိုတာနဲ့ ပတ်သက်ပြီး ရှင်းလင်းချက်'
ဒေါ်စန်းစန်းစိုး liked ဦးခင်'s discussion ဝိပဿနာဆိုတာ စိတ်တစ်ခုက အခြားစိတ်တစ်ခုကို စောင့်ကြည့်ခြင်းဆိုတာနဲ့ ပတ်သက်ပြီး ရှင်းလင်းချက်
ဦးခင် replied to hla moe 24's discussion 'သော တာ ပန်'
"တရားအသိဆိုတာ တရားနာလျက်သိတဲ့အသိရယ် တရားထိုင်လို့ မြင်သိတဲ့အသိရယ် နှစ်မျိုးရှိပါတယ်။ တရားနာတဲ့အသိကို ဆင်ခြင်သိလို့ ခေါ်ဆိုတာဖြစ်ပြီး တရားရှုမှတ်လို့ သိတဲ့အသိဟာ သမာဓိဆိုတဲ့ စိတ်စုစည်းမှု ဖြစ်ပါမှ ရနိုင်တာမို့ အာရုံစူစိုက်နိုင်ပြီး မျက်စိမှိတ်သော်လည်း…"
မေ 7, 2012
ဦးခင် သည် နီစံ (အနီ)'s၏ '၂၂၇ သွယ်သော ၀ိနည်း နောက်ဆုံးပိုင်း'ဘလော့ တွင်မှတ်ချက်ရေးခဲ့ပါသည်။
"၂၀၆မှ၂၁၂ အထိ ကျန်းမာပါလျက်ဆိုတဲ့ စကားရပ်ပါရှိနေပြီး နောက်ဆက်တွဲနေထိုင်သူများအား တရားမဟောရန် ပညတ်ထားသည်မှာ တရားအပေါ် အဂါရဝ ဖြစ်စေတဲ့အပြင် တရားဟောသူကိုပါ မရိုမသေ ဖြစ်စေတာကြောင့် တရားမဟောဖို့ ပညတ်ခဲ့ခြင်းသာ ဖြစ်ပေသည်။ သို့ပါ၍ ကျန်းမာပါလျက်…"
ဦးခင် replied to A BuddhismworldAdmin's discussion 'မေးဖလှယ်ကြရအောင်'
"မဂ်လာပါ။... ကျနော် Gmail က mmmkhin.mm@gmail.com ပါ။ Facebook မှာတော့ Ukhin Crays ဖြစ်ပါတယ်။ Gmail ကိုတော့ သိပ်မဝင်ဖြစ်ပါ။Facebook မှာတော့ တရားဓမ္မနဲ့ ပတ်သက်ပြီး ဆွေးနွေးတာ များပါတယ်။ အားလုံးကို ခင်မင်လျက်ပါ။..."
ကျော်ကို replied to ဦးခင်'s discussion 'ဝိပဿနာဆိုတာ စိတ်တစ်ခုက အခြားစိတ်တစ်ခုကို စောင့်ကြည့်ခြင်းဆိုတာနဲ့ ပတ်သက်ပြီး ရှင်းလင်းချက်'
ဦးခင် replied to ဦးခင်'s discussion 'ဝိပဿနာဆိုတာ စိတ်တစ်ခုက အခြားစိတ်တစ်ခုကို စောင့်ကြည့်ခြင်းဆိုတာနဲ့ ပတ်သက်ပြီး ရှင်းလင်းချက်'
"ကျေးဇူးတင်ပြတယ် ကိုကျော်ကို တရားဓမ္မကို ငယ်ငယ်ရွယ်ရွယ်နဲ့ ပြောဆိုဆွေးနွေး နိုင်ခြင်းကိုလည်း အထူးချီးကျူး ဂုဏ်ယူပါတယ်။ တ၇ားရဲ့ အနှစ်သာရ ကိုလျှင်မြန်စွာ တွေ့သိနိုင်ပါစေလို့ ဆန္ဒပြုလျက်"
"ဦးခင်ပြောတာကိုကျနော်တို့ နားလည်ပါတယ်ခင်ဗျ...ဘာမှမသိသေးတဲ့ လူငယ်တစ်ယောက်လာဖတ်မိရင်သဘောမပေါက်မှာဆိုးလို့ ကျနော်က လူငယ်တွေနားလည်နိုင်မဲ့မှတ်မိလွယ်မယ့် အဓိကအချက်ကိုဆွဲထုတ်ပြီးဦါ်ခင်ရဲ့ ဆိုလိုရင်းကိုဆွဲထုတ်ပေးတာပါခင်ဗျာ..…"
"တင်ပြတဲ့စာကို သေသေချာချာ ပြန်ဖတ်စေချင်ပါတယ်။ ခုထပ်ပြီးတင်ပြ နေတာက တရားရှုမှတ်ပြီး ရလာတဲ့အသိဆိုတာ ဘယ်လိုအသိမျိုးလည်း ဆိုတာကို ပြောလိုတာပါ။ အရာရာကိုရှုမှတ်နေစဉ်မှာ သိလာတဲ့အသိဟာ ဆင်ခြင်ပြီးသိနေတာလား တကယ်တွေ့မြင် တာလားဆိုတာကို ဥပမာလေးပေးပြီး…"
ကလေးတို.ဆရာမ replied to ဦးခင်'s discussion 'ဝိပဿနာဆိုတာ စိတ်တစ်ခုက အခြားစိတ်တစ်ခုကို စောင့်ကြည့်ခြင်းဆိုတာနဲ့ ပတ်သက်ပြီး ရှင်းလင်းချက်'
""စိတ်တစ်ခုကို အခြားစိတ်တစ်ခုနဲ့ စောင့်ရှုခြင်းကို တရားထိုင်တယ်လို့ ဆိုလိုရင်း ဖြစ်ကြောင်း ဓမ္မမိတ်ဆွေတွေကို ရှင်းပြလိုက်ရတာ ဖြစ်ပါတယ် " - ရယ်လို. စောစောပိုင်း ကတည်းက ဦးခင် ရှင်းပြထားပေးပြီးပြီပဲ -…"
"တရားရှုမှတ်ရာတွင် ရှုမှတ်ခြင်းသဘောကို ဆွေးနွေးရာပြောဆိုတဲ့သဘောမှာ နားလည်မှုလွဲနေပုံ ဖြစ်နေသလိုပဲ။ ဆိုပါစို့ သမာဓိမတက်ခင်နဲ့ သမာဓိတက်ပြီး ဘယ်လောက်ကြာရင် သိမှုအမှန်ရသလဲဆိုတဲ့ သဘောလေးက်ု ဆန်းစစ်ကြစေလိုပါတယ်။ တရားရှုမှတ်နေစဉ် တရားကိုရှုတိုင်း သိမြင်တယ်ဆိုတာ…"
"သောတာပန်ဆိုတာ တရားရှု့မှတ်မှ သောတာပန် ဖြစ်နိုင်ပါသလား ဆိုတဲ့မေးခွန်းလေးကို လိုရင်းတိုရှင်း ပြောရရင် ရုပ်နာမ်တရားရဲ့ ဖြစ် ပျက်မှုကို မြင်တွေ့ပြီး တရားရဲ့ အနှစ်သာရ ဖြစ်တဲ့ ရုပ်နာမ်သဘာဝ ချုပ်ငြိမ်းမှသာ သောတာပန် ဖြစ်ကြောင်း ကျမ်းဂန်တွေမှာ အတိအလင်း…"
"ကိုကျော်ကို ပြောတာမှန်ပါတယ် - "စိတ်-ရုပ်-ဝေဒနာ" တွေရဲ့ဖေါက်ပြန်ပြ နေတာတွေကို အစဉ်တစ်စိုက်လိုက်ပြီး "ရှုမှတ်" နေရုံနဲ.မလုံလောက်သေးပါဘူး- အဲဒီ "ဖြစ်ပေါ်" လာတာလေးတွေ သတိနဲ.ကြည့်လိုက်တဲ့ တစ်ခဏမှာပဲ "…"
တရားထိုင်ရာတွင် အတ္တကိလာမထာနဲ့ ကာမသုခလ္လိကနု ယောဂ ဖြစ်မဖြစ်
တရားထိုင်ရာတွင် မဇ္ဈိမ ပဋိပဒါနည်းဖြစ်တဲ့ မ၈္ဂင် ရှစ်ပါးကို ကိုင်ဆောင်၍ ရှုမှတ်လျှင် တရားထိုင်ရာတွင် နာကျင့်ကိုက်ခဲမှုကို သီးခံ၍ နေပေးရခြင်းမှာ အတ္တကိလမထာ သဘောမဆိုင်သ လို ကာမသုခလ္လိကနှင့်လည်း မဆိုင်ပေ။ အတ္တကိလမထာ ဆိုသည်မှာ မိမိခန္ဓာကို တရားမပါဘဲ ညှင်းပမ်းနှိပ်စက်သော သဘောဆန်စွာ ကျင့်ကြံခြင်းကို ဆိုလို တာ ဖြစ်ပြီး ကာမသုခလ္လိက လမ်းစဉ်သည် ကာမဂုဏ်အာရုံတို့တွင် စံစားခံစားခြင်းနှင့် သာ သက်ဆိုင်ပေသည်။ သို့ပါ၍ မဂ္ဂင်ရှစ်ပါး တရားကိုလက်ကိုင် ကျင့်သုံးသူအဖို့ အထက်ပါအစွန်းနှစ်ဖက်မှ ကင်း လွတ်လျက် တရားကို…See More
12:50am အချိန်မတ် 30, 2012, တွင် +☺☻♥မောင်သူရ@♦♣♠•◘○+ မှတ်ချက်ရေးသွားပါသည်။
2:31am အချိန်ဖေဖော်ဝါရီ 15, 2012, တွင် အဖြူရောင်ငှက်ကလေး မှတ်ချက်ရေးသွားပါသည်။
9:31pm အချိန်ဇူလှိုင် 15, 2011, တွင် စိုင်းဇေယျာ မှတ်ချက်ရေးသွားပါသည်။
မင်္ဂလာပါခင်ဗျာ။ ဗုဒ္ဓကမ္ဘာမှနွေးထွေးစွာ ကြွရောက်လာကြတဲ့ ဓမ္မမိတ်ဆွေအပေါင်း စိတ်၏ချမ်းသာခြင်း၊ ကိုယ်၏ကျန်းမာခြင်းနှင့် ပြည့်စုံကြပါစေ။
မေတ္တာပို့ရန်နေရာနှင့် (ပရဟိတအဖွဲ့ )၈လပိုင်း၁၁ရက်နေ့တွင်အလှူရှိပါသည်။
9:10am အချိန်ဇူလှိုင် 15, 2011, တွင် စန္ဒာ မှတ်ချက်ရေးသွားပါသည်။
မင်္ဂလာပါရှင်။ဗုဒ္ဓကမ္ဘာမှနွေးထွေးစွာ ကြွရောက်လာကြတဲ့ ဓမ္မမိတ်ဆွေအပေါင်း စိတ်၏ချမ်းသာခြင်း၊ ကိုယ်၏ကျန်းမာခြင်းနှင့် ပြည့်စုံကြပါစေ။
ဒီဘလော့ကှိုဧပြီ 2, 2012 တွင်10:00am —ရေးသားခဲ့ပါသည်။0Comments0Likes
တရားထိုင်ရာတွင် မဇ္ဈိမ ပဋိပဒါနည်းဖြစ်တဲ့ မ၈္ဂင် ရှစ်ပါးကို ကိုင်ဆောင်၍ ရှုမှတ်လျှင် တရားထိုင်ရာတွင် နာကျင့်ကိုက်ခဲမှုကို သီးခံ၍ နေပေးရခြင်းမှာ အတ္တကိလမထာ သဘောမဆိုင်သ လို ကာမသုခလ္လိကနှင့်လည်း မဆိုင်ပေ။ အတ္တကိလမထာ ဆိုသည်မှာ မိမိခန္ဓာကို တရားမပါဘဲ ညှင်းပမ်းနှိပ်စက်သော သဘောဆန်စွာ ကျင့်ကြံခြင်းကို ဆိုလို တာ ဖြစ်ပြီး ကာမသုခလ္လိက လမ်းစဉ်သည် ကာမဂုဏ်အာရုံတို့တွင် စံစားခံစားခြင်းနှင့် သာ သက်ဆိုင်ပေသည်။
သို့ပါ၍ မဂ္ဂင်ရှစ်ပါး တရားကိုလက်ကိုင် ကျင့်သုံးသူအဖို့ အထက်ပါအစွန်းနှစ်ဖက်မှ ကင်း လွတ်လျက်…
မောနေယျ အကျင့်မြတ် ဂါထာတော်နှင့် နိဿရ
ဒီဘလော့ကို ဖေဖော်ဝါရီ 25, 2012 တွင်6:57am —ရေးသားခဲ့ပါသည်။ 1 Comment0Likes
မောနေယျဟူသည်ကား မဂ်ဉာဏ်လေးပါးကို ခေါ်ဆိုသည် အထူးသဖြင့် အရဟတ္တမဂ်ဉာဏ်ကို မောနေယျဟူ၍ ခေါ်၏။ ထို့ကြောင့် မဂ်ဉာဏ်လေးပါးသို့ ရောက်ကြောင်း ကောင်းမြတ် မှန်ကန် သော အကျင့်ကို မောနေယျပဋိပဒါ = မောနေယျ အကျင့် ဟူ၍ ခေါ်ကြောင်းကောင်းစွာ မှတ်ယူရာ၏)
ထိုဟောကြားတော်မူအပ်သည့် မောနေယျအကျင့် ပဋိပဒါ (၂၃) နှစ်ဆယ့်သုံးဂါထာပါဠိနှင့် မြန်မာစကားပြေတို့ကား
(၁) မောနေယျံ တေ ဥပညိဿံ
ဟန္ဒ တေ နံ ပဝက္ခာမိ၊
သန္ထမ္ဘဿု ဒဠော…